» आन्दोलन तुहाउन कांग्रेसलाई तटस्थ राख्ने ओलीको नीति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसद विघटनको सरकारी निर्णयलाई सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो आरोप बाहिरबाट नभएर पार्टीकै नेताहरुले लगाइरहेका छन् ।
कोइराला परिवारबाट त देउवालाई प्रतिगमनको मतियार बनेको आरोप लागिरहेको छ । यस्तो बेला पनि सभापति देउवा भने चुनावको विरुद्ध नबोल्न अनुरोध, धम्की र बिन्ती गर्दै हिंडिरहेका छन् । यही क्रममा उनी सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न उनकै निवास बोहोराटार पुगे ।
उनले निर्वाचनको विरुद्ध नबोल्न र माहोल नबनाउन आग्रह र अनुरोध गरे । झण्डै एक घण्टा लामो संवादपछि उनले केन्द्रीय समितिको बैठक नै सारेका छन् । यसअघि पुस २७ गते बस्ने बैठक माघ ६ गतेका लागि बोलाइएको थियो । अब यो बैठक पुस १३ गतेका लागि सरेको छ ।
संसद विघटनको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको बेला प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै देउवाले बैठक नै सारेका हुन् । अदालतमा निर्णय प्रक्रिया सुस्त भइरहेको छ । देउवाले पौडेललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसके पनि तटस्थ राख्न चाहेको र यो चाहना प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देउवालाई आफूलाई यसअघि दिएको बचनअनुसार कांग्रेसलाई सडकमा जानबाट रोक्न भूमिका खेल्न सन्देश पठाइरहेको स्रोतको दावी छ । ओलीको बुझाई छ- प्रतिपक्षी कांग्रेस सडकमा उत्रियो भने आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा अदालत पनि हच्कन सक्छ ।
अदालतलाई ढुक्क राख्न पनि ओली र देउवाले भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको बताइन्छ । तर कांग्रेसभित्र आन्दोलनको पक्षमा ध्रुवीकरण बढिरहेको छ । वरिष्ठ नेता पौडेल र कृष्ण सिटौला आन्दोलनका पक्षमा माहौल बनाउन खटिएका छन् ।
उनीहरुको साझा बुझाई छ- संविधान नै बाँकी नरहे एउटा निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेर के हुन्छ ? अनि ओलीले आफू हार्ने निर्वाचन किन गराउँछन् ? अहिलेको संविधानलाई कुल्चनु भनेको परिवर्तनका सबै उपलब्धिहरु बाँकी नरहनु हो र देशलाई झण्डै २ दशक अगाडि फर्काउनु हो । यो एकप्रकारले प्रतिक्रान्ति हो र प्रतिगमन हो ।
हरेक भाषण र भेटहरुमा पौडेल र सिटौला समूहबाट यही अभिप्रायका सन्देश आइरहेका छन् ।
देउवाले भने ओलीको चाहनाबमोजिम सडक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । कांग्रेसकै नेताहरुले लगाइरहेको यो आरोप व्यवहारबाट पुष्टि पनि भइरहेको छ ।
प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसअघि महामन्त्री शशांक कोइरालालाई दुईपटक बूढानीलकण्ठ बोलाएर सम्झाइसकेका छन् । ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने तर निर्वाचनको विरोध नगर्ने देउवाको रणनीति स्पष्ट छ । पार्टीको बैठकमा समेत यस मतको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण बढेपछि उनले बैठक बोलाउनै चाहिरहेका छैनन् ।